I-25 U IMILO YOYILO LWEKHITSHI (IMIFANEKISO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-25 U Imilo yoyilo lweKhitshi (Imifanekiso)
I-25 U Imilo yoyilo lweKhitshi (Imifanekiso)
Ukonwaba kubapheki nangaphezulu: Uyilo lwekhitshi olubunjiweyo lunendawo yokusebenza ethe saa kwiindonga ezintathu ezidibeneyo. Isakhiwo esiqhelekileyo solu hlobo lwekhitshi zimbini iindonga ezihambelanayo ngokubhekiselele kwisithathu. Ikwaziwa njengehashe, uhlobo lwe-C okanye ikhitshi enobume be-J kwaye inokwenziwa yenzelwe indawo ezincinci okanye ezinkulu.
Kulo mfanekiso ungasentla kwekhitshi lanamhlanje lisebenzisa iiplanga zetiak ezenziwe ngee laminate kwiikhabhathi zalo kwaye zidityaniswe nezinto ezimhlophe eziqinileyo zomphezulu wee-countertops. Iikhabhathi ezingaphezulu, nangona kunjalo, zisebenzisa ii-laminates ezimhlophe kwiingcango zazo kunye neengcango ezingenazintsimbi ezenziwe ngentsimbi endaweni yeengcango ezenziwe ngomthi. I-backsplash ngumthunzi okhanyayo wetayile eluhlaza okwesibhakabhaka.
Kwikhitshi ezimile u-U, iincopho zokubala kunye neendawo zokusebenza ezingqonge umpheki macala onke. Unxantathu osebenza ekhitshini ungasasazeka phezu kweendonga zontathu, udonga ngalunye lusebenza njengendawo yokusebenza enye. Ngokufanelekileyo, umpheki unokuma embindini wegumbi kwaye ajike ngokulula ukufikelela kwindawo nganye yokusebenza.
Uyilo olumiliselwe u-U lukwalungele usapho olupheka kunye ngenxa yokwahlulwa kwezitishi zomsebenzi abantu abaliqela ukuba basebenze ngaxeshanye kwaye balungiselele isidlo ngokulula.
Indawo evulekileyo yesicwangciso, enye ingcinga enkulu yokwenza ikhitshi emile njengo-U kukubandakanya ibhentshi yesiqithi okanye i-counter top njengecala elinye le-U. Isiqithi sisebenza njengesahluli, sahlula indawo yekhitshi kwidinning okanye igumbi lokuhlala kodwa ligcina indawo ivulekile, ivumela abapheki ukuba bathathe inxaxheba ngakumbi kubomi bosapho.
Iindwendwe kunye namanye amalungu osapho banokuhlala kwigumbi elilandelayo okanye esiqithini kodwa babonwe kwaye beviwe ekhitshini. Ngale ndlela, banokunxibelelana nabapheki kwaye abapheki banokuthatha inxaxheba kubomi bosapho ngaphandle kokonyusa ukugcwala kwabantu ekhitshini.
Isilingi yekhitshi senziwe ngomthi ococekileyo ngee-trusses ezibonakalayo. Ikhabhathi yenziwe ngeplanga emhlophe eqinileyo emhlophe kwaye yenzelwe ukuba isebenze kunye neekhabhathi ezisisiseko ezibanzi kunezo zingaphezulu. I-oveni, ifriji, kunye nomgqomo wenkunkuma unokugqitywa kwentsimbi engenasici ehambelana ncam nesiqithi sekhitshi kunye nephepha legranite. Izitulo zebar zentsimbi ezinokumnyama ezimnyama zijikeleze iziko, zisenza indawo leyo ibe yindawo yokutyela nayo.
Isiqithi sekhitshi sisiqwenga seklasikhi esisike iziqwenga eziqhelekileyo okanye isetyhula. Esi siqithi sasekhitshini sinokuphakama okusemgangathweni, side kwaye siphantse sixande, kodwa sinee curve ezintsonkothileyo kumacala ahlukeneyo. Oku kuhambelana ngokugqibeleleyo nokuziva kweklasikhi kunye nobuhle bekhitshi lonke. Isiqithi esiqhelekileyo sineekhabhathi ezisisiseko ezenziwe ngomthi omdaka omnyama ogqunywe ngentla emhlophe emhlophe. Oku kungqongwe ziikhabhathi eziluhlaza eziluhlaza ezize nokubumba kombala ofanayo. Iindonga zimhlophe nge-beige cornice.
Isithuba kweli khitshi sandiswa ngaphezulu kweekhabhathi ezimhlophe eziqinileyo zomthi ezijikeleze kunye neekhabhathi ezisisiseko zombala ofanayo kumacala nakwisiqithi sasekhitshini. Ukuhlamba kunokwenziwa ngesiteki sokubala esingentla. Isiqithi sekhitshi sineetheyibhile emhlophe emhlophe, kwaye ngaphezulu kwayo kukho into eyahlukileyo kweli khitshi; ngeepani zentsimbi kunye nemibala kunye neebhasikiti.
Eli khitshi libanzi. Yiyo ke le nto, inokulungiselela isiqithi esikhulu sekhitshi esixande kumacala ama-2 kwaye sivelise isangqa kumacala ashiyekileyo. Ine-countertop eqinileyo emnyama enesinki, apho ukuhlanjwa kunye namanye amalungiselelo okupheka enokwenziwa ngokufanelekileyo. Iikhabhathi zenziwe ngokutshintsha ii-laminates ezimnyama kunye ezimhlophe kwaye udonga olumhlophe lwezitena longeza i-flare kwi-oveni nakwicala lesitovu. Nangona le khitshi ubukhulu becala i-monochromatic, iitrasi zomthi nezibonakalisiweyo kunye nezibane ezimilise isibane zinceda ukukhulisa ukuziva kweklasikhi kwale ndawo.
Le khitshi ineeminti eziluhlaza eziluhlaza kunye nesiseko sesiqithi sasekhitshini. Isiseko sesiqithi sasekhitshini senzelwe ukugcinwa, kunye nesiqingatha sokutya. Icala lokutyela lilize kwaye lixhaswe ziintsika. Indawo yokutyela inokwamkela izidlo ezi-4 ezinezitulo ezi-4 ezimhlophe eziqinileyo zomthi. Le khitshi enemibala elula kwaye ikhanya kakhulu igxininiswa ngumbane omnyama oxhonywe embindini wesilingi.
Leli khitshi elinamandla linomthi okhethekileyo wamatye ophuzi ohambelana ngokugqibeleleyo kunye neendonga ezipeyinti ezityheli. Iikhabhathi ezingaphezulu zikubonakalisile okuqulathiweyo ngeepaneli zeglasi okanye akukho zipaneli konke konke. Ngaphandle kweekhabhathi ezimhlophe eziqinileyo ezimhlophe, ukusebenza okungakumbi kufunyanwa ngokugoba icala elinye lee-countertops kunye nokongeza izitulo. Le ndawo inokusetyenziselwa amashwamshwam okanye ukutya kwindawo encinci yabantu.
Eli khitshi libanzi kwaye lilula. Uninzi lwekhitshi lumhlophe ngaphandle komphezulu omnyama kunye nomdaka wegranite kunye nefriji yentsimbi engenasici. Iifestile ezinamakhethini amhlophe zivumela ukukhanya okungakumbi ukuba kungene kwigumbi kwaye iikhabhathi ezimhlophe zibekwe ngaphezulu nangaphantsi kwetafile yekhitshi elilungelelaniswe ngokugqibeleleyo.
I-wengue emnyama egcobe ngaphezulu kweekhabhathi ifuna ingqalelo yale khitshi. Oku kuthelekiswa nesiqithi sekhitshi esisetyenziselwe isiqingatha ekutyeni okulula kwaye esinye isiqingatha esijonge ekhitshini eliphambili sisetyenziselwa ikhabhathi kunye nokuhlamba izandla.
Le khitshi yeklasi ibanzi kwaye ivulekile. Ukukhanya kungena ngokukhululekileyo, kwenza ukupheka kunye nokutya kube lula, ngakumbi ngexesha lasemini. Ikhitshi lijikelezwe yikhabhinethi emhlophe egxunyekwe zizibiyeli zakudala kwaye ikhutshwe ngecwecwe elibomvu leplanite.
Le khitshi ijikelezwe ziikhabhathi ezimhlophe ezimnyama ezinomthi omnyama namnyama. Isiqithi sasekhitshini sisetyenziselwa ukupheka kunye nokugcina, njengoko inesitovu ngaphezulu kunye nezinye iikhabhathi ezisisiseko. Kwicala lasekunene lekhitshi, i-counter top inezinga eliphezulu apho iziqhamo kunye neentyatyambo ezithile zinokubekwa khona.
Le khitshi ye-ultra-modern and small, kodwa indawo eninzi iyenziwa ngokungabikho kwesiqithi sekhitshi kunye neekhabhathi ezininzi zokugcina. Iikhabhathi ezisisiseko zenziwe ngomthi omnyama omdaka kunye neziphatho zentsimbi ngelixa iikhabhathi ezingaphezulu zibekwe ngobuchule ecaleni kwomoya kwaye zahlula iikhabhathi ezisisiseko kunye nokugqiba kwazo okumhlophe okuqinileyo ngeziphatho zentsimbi ezifanayo. Ikhawuntari yenziwe ngegranite emhlophe enemikhono emnyama.
Eli khitshi lelinye ikhitshi eline-ultra-modern kunye ne-countertop yamatye amhlophe kunye neekhabhathi ezingwevu. Izitulo zeblack ezimnyama ezenziwe ngombala kunye nezinto ezimnyama zokulala zilele kwelinye icala lesitovu kunye nesinki enqamlezayo. Iivazi ezibomvu nezimnyama zibonisiwe ukukhulisa umbala ongathathi cala kuloo ndawo.
Uyilo lwekhitshi olubunjiweyo ngesiqithi lunokudala unxantathu osebenzayo njengoko unceda umntu ukuba afikelele ngokulula kwizixhobo eziyimfuneko kwaye aqhubeke nokubonelela ngendawo yokubala enokusondela kufutshane. Eli khitshi lizaliswe ngama-mahogany amnyama amnyama ngaphezulu kunye neekhabhathi ezisisiseko. Amanqwanqwa amatye e-cream adibanisa kakuhle kunye neendonga ze-cream. Izityalo zibekwe kwikona nganye yeekhabhathi ukongeza ubomi kule ndawo. Indawo yokutyela enezitulo ezinamabala mahogany kunye netafile ikwicala elichasene nesiqithi sekhitshi.
Eli khitshi linamacwecwe amnyama acwebezelayo atyabeka iikhabhathi zomthi kwisiseko esivela kwicala lasekhohlo le-U ukuya ngasekunene, apho izitulo ezibini eziphakamileyo zinokufunyanwa khona kwizidlo. Iikhabhathi ezinombala ofanayo kunye nezinto ezibonakalayo zinokufumaneka ngaphezulu nangasecaleni kombane, apho kufakwa khona i-microwave kunye nee-oveni. Isiqithi sasekhitshini sisebenza njengetafile yezidlo ezimbini kunye nezitulo zaso ezimdaka ngombala ezimdaka ngombala ezimhlophe. Esi siqithi sasekhitshini sineekhabhathi kwisiseko sokugcina ngakumbi.
Eli khitshi licocekile kwaye liphezulu. Iikhabhathi ezisisiseko zingumthi oqinileyo omhlophe olaminethiweyo ophethe izibambo zentsimbi kwaye imiphezulu yeetafile imnyama ngokuqinileyo. Iindonga zine-laminates yeplanga ngaphezulu kwepeyinti emhlophe kwaye iimfama ezisetyenzisiweyo ziyintliziyo yomthunzi wepayini nayo. Izityalo ezincinci zokuhombisa kwiimbiza ezimhlophe zongezwa ukongeza imvakalelo entsha kweli khitshi langoku.
Le khitshi emile u-U ine-beech ngaphezulu kunye neekhabhathi ezisisiseko esine-brown granite countertop kunye ne-backsplash. Isiqithi sekhitshi eside sinokufunyanwa embindini kunye ne-grill, i-vent, amacala aneepanele, kunye ne-countertop ye-granite emdaka ehambelana nayo. Izixhobo ze-Upscale ezingenasici kunye nefriji engaphezulu zenza umbono omkhulu.
Eli khitshi linefestile ebekwe ngobuchule kwikona ukuvumela ukukhanya kungene kwigumbi. Iithayile eziluhlaza umva ubuyile ezindongeni nge-poplar ephezulu kunye neekhabhathi ezisisiseko. Inendawo yokubeka itafile emdaka eqinileyo nebengezelayo enendawo engenamngxuma kwicala lasekhohlo le-U-shape ukuvumela indawo yesihlalo. Kwicala lasekhohlo le-U-shape, iseti yama-4X5 yamacandelo okugcina ukucoca kunye nezinye izinto eziyimfuneko ekhitshini ziyafumaneka.
Indawo encinci kodwa ende ekhitshini yenziwe ninzi ngeekhabhathi ezimhlophe eziqaqambileyo ezimhlophe ezibekwe ngobuchule ezindongeni ngelixa i-vent kunye ne-induction cooker ibekwe ecaleni evulekileyo kufutshane nepaseji. Iindonga zineethayile ezimnyama eziqinileyo zokubuyela umva kunye neemela zensimbi ezingenasinxibo, i-oveni kunye nefomathi yokongeza isandi kwisikimu sombala we-monochromatic.
Eli khitshi libunjiweyo le-U lineekhabhathi zekhrimu ngaphezulu kunye nefestile kunye neemfama ezimhlophe embindini. Isinki ibekwe ngokuthe ngqo ezantsi kwefestile apho kungafunyanwa khona iikhabhathi ezingaphezulu, ezinabela emacaleni. Embindini wekhitshi, itafile yamaplanga enezikwere enamabala amnyama wengue kwiintsika kunye ne-mahogany kwezinye iindawo. Ngqo ngentla kwesi siqwenga somthi sisibane sephepha lesinyithi.
Le khitshi encinci, yanamhlanje, kunye ne-chic isebenzisa imibala kunye neepateni ukongeza ukungcangcazela kwindawo elula. Iikhabhathi ezingaphezulu zenziwe ngomthi oqinileyo omthubi elaminethiweyo kwaye ifakwe kwiindonga ezichazwe ngeepatheni ezintsonkothileyo zezimvi namhlophe. I-countertop kunye ne-backsplash zenziwe ngomthi olaminethiweyo kwaye iikhabhathi ezingaphantsi kwayo zimhlophe ngokuqinileyo. Isinki inokufumaneka kwicala lasekhohlo, apho ibhloko ephakamileyo yomthi elaminethiweyo inokusetyenziselwa ukugcina izinto zokuhlamba izitya.
Eli khitshi liphawuleka lisebenzisa ii-laminates eziqinileyo ezimnyama kuyo yonke ikhabhathi enezinto ezingenasici zentsimbi ye-oveni kunye neziphatho zekhabinethi. Kukho ifestile ngasekhohlo kwaye umthi omnyama oqinileyo omnyama unokufunyanwa ngaphezulu kwayo, usuka kwikhabhathi. Ipateni ebhalwe embossi inokufumaneka kwivenkile nangaphezulu kwefestile. Itafile yegranite emnyama imelana ngokuchanekileyo nesikimu sombala kwaye yahluke kumgangatho omhlophe kunye neendonga.
Eli khitshi likhitshi elimile okwe-U elineefestile kunye namagumbi angaphezulu ngasekunene kunye nekhabhathi emhlophe eqinileyo emhlophe kwelinye icala. I-oveni inokufumaneka embindini weekhabhathi kwaye phambi kwayo kukho isiqithi sekhitshi esivumela izidlo ezimbini kunye nokuhlamba esinkini. Enye itepu nesinki inokufumaneka kufutshane neefestile. I-countertop ye-granite ebomvu isetyenziselwa ukugqamisa ikhabhinethi emhlophe.
Iplanga emhlophe elaminethiweyo yenza uninzi lweefreyimu zekhabhinethi. Iikhabhathi ezingaphezulu zineefaneli zeglasi ezibandayo kwaye zixhonywe ngaphezulu kwe-mint green tile backsplash. Ifriji enkulu inokufumaneka kwicala lasekhohlo, ecaleni kwe-microwave, nangaphesheya kwesiqithi sekhitshi esinki kunye nezihlalo ezibini zentsimbi ezinezinto ezingwevu. Iikhabhathi ezisisiseko zenziwe ngeplanga eqinileyo yomthi, njengamashalofu asefestileni. Itafile emhlophe eqinileyo eqaqambileyo ibalaselisa imibala ebonakalayo. Kwicala lasekunene lasekunene, i-laminate eluhlaza eqinileyo ingaphezulu kwaye iphuma kwi-countertop njengendawo yokutyela yabantu abahleli kwizitulo zentsimbi ezimhlophe ezimhlophe.
Uyilo lwekhitshi olumilisiweyo zihlala zineepeninsula zokutyela ezinokuhlalisa enye okanye ngaphezulu izidlo zokutya. Eli khitshi linee-countertops ezimnyama zegranite kunye nepeninsula eqhotyoshelweyo ngokwandisa ikhawuntari yeenkuni zokutya. Kukho iikhabhathi ze-beech ezingaphezulu kunye neecomputer kwicala lasekunene, ngelixa iikhabhathi ezisisiseko zento efanayo zisuka kwicala lasekunene lendawo ye-U ukuya ngasekhohlo.
Apha ngezantsi kwamacandelo ekunene, ukubuyela umva kwesinyithi kungafunyanwa ngasemva kweesinki ezi-2 kunye netompu kunye ne-countertop yamatye emnyama isuka kuyo iye kwelinye icala. Kwicala lasekhohlo, i-2 izitovu zokupheka ezinokufunyanwa zingafunyanwa, apho kukho itafile encinci phambi kwayo. Iseti efanelekileyo yokupheka kunye neencoko nabahlobo kunye nosapho.
143 Uyilo lweKhitshi eNtofontofo - Iingcamango ezincinci zeCuisine Design - Uyilo lweSiqithi seKhitshi yesiqhelo - Iingcamango zeKhitshi eziMilisiweyo
unxibe ntoni xa uzilungiselela isidlo sangokuhlwa
eyona ndawo yokuhlala iiholide zekrisimesi ezibandakanya wonke umntu
umtshato olungileyo ngexabiso eliphantsi
Isiqithi selizwe lasekhitshini
imibuzo oza kuyibuza umtshato womtshato
izinto zokucwangcisa umtshato